नेतागण, देशले के पायो ? हामी नागरिकले के पायौं ? - बडिमालिका खबर
चौध वर्ष भयो देशमा गणतन्त्र आएको । आज ६ वर्ष पूरा भएको छ संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको । तर, नेतागण, देशले के पायो ? हामी नागरिकले के पायौं ?
समृद्धिजति आफ्नो भागमा पस्केर हामी जनतालाई गरिबी बाँड्नु भो ! कसरी बाँच्ने हामी गरिब जनता ? बोरामा पैसा बोकेर जाँदा झोला भरी सामान नआउने भइसक्यो । बजारमा श्रम बिक्नै छाडिसक्यो । के गर्नु नेतागण, हजुरहरूको मीठो भाषणले हामी नागरिकको रित्तो भाँडोमा रासन नभरिँदो रहेछ ।नेतागण !